बैंकबाट पाउनुहोस् बिना धितो १५ लाखसम्म ऋण - हाम्रो देश
बैंकबाट पाउनुहोस् बिना धितो १५ लाखसम्म ऋणकाठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले पेशागत कर्जा सार्वजनिक गरेको छ ।
सपनालाई एउटा नयाँ उडानः पेशागत कर्जा, बिना धितो नारासहित बैंकले उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो । योजना अनुसार न्यनुतम व्याजदरमा विना धितो १५ लाख सम्मको कर्जा दिने बैंकले दिने भएको छ ।
१५ लाखसम्मको कर्जा लगायत दुर्घटना बीमा, जीवन बीमाको सुविधा समेत लिन सक्ने बताईएको छ ।
योकर्जासुविधा कस्ता कर्मचारीले लिन पाउँछन् ?
१. चार्टड एकाउन्टेनहरु –क्ष्ऋब्ल्) का सदस्यता प्राप्
२. डाक्टरहरु (नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट स्विकृत प्राप्त व्यक्तिहरु)
३. ईन्जीनियरहरु (नेपाल ईजिनियरिङ काउन्सिलबाट स्विकृत प्राप्त व्यक्तिहरु)
८. लाइसेन्स प्राप्त पाईलटहरुगरिमा विकास बैंक लिमिटेडले पेशागत कर्जा
सार्वजनिक गरेको छ ।सपनालाई एउटा नयाँ उडानः पेशागत कर्जा, बिना धितो नारासहित बैंकले उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो । योजना अनुसार न्यनुतम व्याजदरमा विना धितो १५ लाख सम्मको कर्जा दिने बैंकले दिने भएको छ ।
१५ लाखसम्मको कर्जा लगायत दुर्घटना बीमा, जीवन बीमाको सुविधा समेत लिन सक्ने बताईएको छ ।योकर्जासुविधा कस्ता कर्मचारीले लिन पाउँछन् ?१. चार्टड एकाउन्टेनहरु –क्ष्ऋब्ल्) का सदस्यता प्राप्त२. डाक्टरहरु (नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट स्विकृत प्राप्त व्यक्तिहरु)३. ईन्जीनियरहरु (नेपाल ईजिनियरिङ काउन्सिलबाट स्विकृत प्राप्त व्यक्तिहरु)४. शिक्षकहरु (नेपाल सरकारका स्थायी शिक्षकहरु तथा विश्वविद्यालयहरुमा कार्यरत स्थायी प्राध्यापकहरु)
hamro des 28 सेकेन्ड अगाडि